केपी ओली नेत्रित्वको सरकारले गर्‍यो अहिलेसम्मकै राम्रो निर्णय, को -को भए खुसी ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
केपी ओली नेत्रित्वको सरकारले गर्‍यो अहिलेसम्मकै राम्रो निर्णय, को -को भए खुसी ?
सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएईविरुद्धको टि–२० र एक दिवसीय सिरिज जितेर आएका खेलाडीलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिएर सम्मान गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
आईसीसीका नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँले अब आईसीसीमा रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ । त्यसपछि केके पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो थाहा होला ।’ त्रिवि क्रिकेट मैदानको पिच निकै पुरानो भइसकेको छ । ३० यार्ड र आउट फिल्ड पनि राम्रो छैन । प्लेयर बक्स त छ तर, त्यहाँ पनि पर्याप्त पूर्वाधारहरु बनेको छैन ।
यसैबीच समाज कल्याण परिषद्ले भवन खाली नगर्दा लैनचौर स्थित उक्त भवनमा सार्ने भनिएको उपपराष्ट्रपति कार्यालय अझै सर्न सकेको छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसँगै रहेको उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लौनचौरस्थित परिषदको भवनमा सार्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
भवन खाली गर्न अझै केही दिन लाग्ने परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालले जानकारी दिए। लैनचौरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास बनाउने, परिषद्लाई पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको नयाँ भवनमा सार्ने र समितिलाई महिला विभागको भवनमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
मंसिरभित्रै परिषद भवन खाली गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको थियो। तैपनि परिषदले भवन नछोडेपछि गत शनिबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले भवनको निरीक्षण गरेका थिए। उपराष्ट्रपति पुनले परिषद भवन अवलोकन गरेपछि फागुन २ गतेभित्र भवन खाली गराउन आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ गते बसेको बैठकले परिषदको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। जनताको दान सहयोगबाट बनेको ४५ कोठे परिषदको भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए। परिषदलाई बाल कल्याणको भवन प्रयोग गर्न दिने सरकारी निर्णयपछि कर्मचारी आन्दोलनबाट पछि हटे।
दश हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणको आर्थिक सहयोगबाट तीन करोड खर्चमा परिषदको चार तले भवन बनेको हो।२०४५ सालमा बनेको उक्त भवनको उद्घाटन राजा विरेन्द्रले गरेका थिए। परिषदको नाममा भृकुटीमण्डपमा पनि जग्गा छ। भवन भने छैन।